Waxaan nasiib u ah in da'da la nool marka ay jiraan qalab aad u badan oo la heli karo. Waxay noo oggolaan in ay dhagaystaan ​​music on go, video chat ah ula saaxiibo, record footage iyo wax ka badan. Laakiin, dhibaatooyin muuqan kartaa marka aad isku dayaan in ay talaabo ka mid ah aaga raaxada iyo isku dayaan in ay sameeyaan wax cusub qalabka aad, oo kaliya in ay u dushaan guuldareystaan ​​ay sabab u tahay qaabab file warbaahinta leheyn.
Gaar ahaan haddii aad tahay user Apple heegan ah, aad ku xidhay si ay u dareemaan Micida mid sun ah oo lahaansho qaabab video sidii aad isku daydo in aad u aragto wax ku saabsan qalab ah in madax-diido in uu u ciyaaro. Mid ka mid ah qaab video lahaansho sida waa MOV, ee ay soo Apple oo loo isticmaalo si gaar ah ciyaartoyda ay warbaahinta QuickTime.
Iyada oo ah qaabab badan oo file kala duwan oo maalmahan, waa layaabna ma leh user celceliska mararka qaarkood dareemi kartaa si buuxda u lumay oo kaliya doonayo inuu ku qaylin: "? Filename kordhin, maxayna ka dhigan yihiin" Aan awoodin inuu u ciyaaro file warbaahinta aad dhab ahaantii waa wanaagsan ee suurtogalka ah natiijada. In seenyada ay dhacdo ugu xumaa, aad badalo doonaa file warbaahinta ah oo tegi doonaa iyada oo khasaare variable ah oo tayo leh, taasoo keentay in file a in uu yahay uun hoos oo hore keligeed. Nasiib wanaag, ma jiro xal lagu kalsoonaan karo software kaliya aad u.
Part1: Best MP4 in MOV Video Converter
Part2: MP4 Free in Converter MOV
Part3: MP4 Online in Converter MOV
Part4: Dooro MP4 in MOV Video Converter in adiga kugu habboon
Part5: Aqoonta Extended u MP4 iyo MOV qaabab
Marka aad tahay oo dhan oo ku saabsan doonaya in ay ku dhameysan diinta ka mid qaab file si kale isla markiiba oo aan la igu carqaladeeyo karaan si ay u bartaan diiniga ah habka Deji ah, Wondershare Video Converter Ultimate (WVCU u oran gaaban) waa uun qalabka saxda ah ee hawsha. Quick, anfacaya oo lagu kalsoonaan karo, WVCU samayn doonaa shaqada waqti hore si hufan oo markii 1000aad.
Interface dareen leh oo xul ah sarreeya keentay qaabab file WVCU sameeyo xarrago leh, xal weli awood badan si aad warbaahinta dhibaatooyin diinta file oo dhan. Weli wanaagsan, WVCU yimaado la editor ah, gubi, ciyaaryahanka dhisay-in oo downloader ka video marti goobaha sida Youtube (!). Ha illoobin ku saabsan rakibidda barnaamijka diinta file warbaahinta kale oo kasta, WVCU yahay oo dhan aad waligaa u baahan doontaa.
Sida loo Beddelaan MP4 in MOV Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate?
Ku bilow adigoo gujinaya ah "Add Files" button iyo xulashada badan files MP4 sida aad rabto (Control qabtay aad keyboard in ay doortaan files duwan ee hal mar).
Markaas, guji menu dropdown ah oo ay helaan qaab MOV ah. Ogow in "HD" subtab of this menu sidoo kale uu heysto dooq kale oo ah "MOV HD", inkasta oo ay tahay khayraad kale oo badan oo degdeg ah oo ay qaadataa muddo ka badan version this.
Hadda, aad edit karaa video ah in aad ka jeelahay adigoo riixaya "Edit" button. Tani waxay ka dhigan tahay yaraynta, isagoo intaa ku daray subtitles ama saamaynta, qoqobada wax soo saarka ama kaliya jediyay ah watermark jir Bannaankii oo dhan.
Marka aad ku faraxsan tahay sida video uu u muuqdo, guji "OK" daaqadan, ka dibna riix "Beddelaan". Hawlaha qaab beddelidda ayaa ku dhowaad isla dhameysan doono. Ogeysiis saxaarad hawl A arbushin doonaa oo halkan aad ka furan kartaa folder bartilmaameedka ama guji badhanka isla gudaha Converter ah si ay u gaaraan file MOV aad.
In kasta oo dhammaan ilaalinta ee aan awoodi karaan sida dukaameeysatada online, dad badan ayaa weli dareemaan shahaado gaar ah oo Anxiety marka wax iibsigu software. Maxay yihiin hadalladan aad iibsato si sax ah? Waxa ay noqon doontaa weyn si ay u tijaabiso barnaamijka ka hor waxa ay soo iibsan, ma uu doonaynin waxay?
Tani waxay ahayd middii dhibic ka mid ah Wondershare Video Converter Free (WVCF u oran gaaban). Laakiin, waa version ah oo lacag la'aan ah oo ay walaalkiis xirfad dheeraad ah oo kor lagu sharaxay oo keliya ma aha. WVCF waa wax soo saarka Converter si buuxda u shaqaysa oo si dhab ah looga cabsado video in darayaa badan oo qiimo u computer desktop aad.
Sida loo Beddelaan MP4 in MOV Isticmaalka Wondershare Video Converter Free?
Bilow dooranaayo gudbiyo si loogu badalo galay MOV. Riix ah "Add Files" button iyo dooran file ah si loogu badalo ama jiita & daadiyaa mid ama ka badan galay suuqa kala Converter weyn.
Dooro qaab MOV ka menu dropdown on xaq ah. Xusuusnow in qaab MOV ah waxaa laga helaa meelo dhowr ah oo tan menu, mid ka mid ah kuwaas oo ka yar yahay "Favorites".
File ayaa hadda la saxar kartaa adigoo gujinaya on the "Edit" button, kuwaas oo furi doona daaqad cusub. Interface halkan wax yar ka duwan yahay mid ka mid ah laga helay WVCU, laakiin u shaqeeya isla waa weli waxaa jira.
Marka aad samayn, "OK" daaqada iyo guji weyn buluug "Beddelaan" meesha ugu hooseysa. Sug nidaamka si ay u buuxiyaan oo ku taxan ee cagaaran muuqan doonaa. Markaas, guji "folder Open" button iyo in ay tahay!
MP4 Online in FLV Video Converter
MP4 Free in MOV Video Converter
Best MP4 in MOV Video Converter
Description Qaab file warbaahinta lahaansho isticmaalaan Lugood iyo iDevices, gaar ahaan ku haboon oo ku saabsan ka caagan-ka tafatirka.
MP4 waa qaab aad u caan ah oo weel isticmaalay ku kaydiso video, audio, iyo xogta Cinwaan. Tani waa qaab caalami ah oo ay taageerayaan ku dhowaad qalab kasta oo la shaqeynta loo maqli karo warbaahinta.
media player VideoLAN VLC
Sida loo Edit MOV Video Faylal ay ku Mac / Win
Sida loo Laablaab Videos MOV
Sida loo Beddelaan wmv in MOV
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 in MOV la Loss Tayada Zero